"Goy iwe, Russ, mudiwa wangu." Analysis detembo SA Nemaeva
Sergey Esenin - kumwe rakakurumbira uye kufarira vadetembi chepakuvamba XX remakore, yave wakayeriswa guru mari lyrical mabasa ake pakati Russia, vanhu vayo, hunhu uye upenyu. Aiva mukana wokushanyira dzakasiyana dzenyika, kuti zvose kugadzirisa kupi nani zvikuru, asi aigara achisuwa musha wake pristine uye achauya zvechokwadi shure zvakare. Nokuti iye, Russia yagara muenzaniso eumambo expanses yeminda masango, migwagwa ine guruva, nematambudziko uye murimi mudiki nemisha pamwe zvirindo squat.
"Goy iwe, Russ, mudiwa wangu." Analysis detembo Nemaeva
Nemaeva haagoni anoonekwa somunhu nyanduri idealist, akaona kuti munyika yake pane zvinokanganiswa zhinji, asi zvisinei akamukanganwira yake kusakwana, muchivadzvinyirira uye pfupi-kwehurumende pakati landlords, dzose kunwa vanhu uye kumutswa kumhedziso nokutenda wakarurama uye wakanaka mambo. Rudo urwu akarondedzera mubasa rake yakakurumbira "goy iwe, Russ, dzangu", kuongorora kuti, tinogona kutaura nechivimbo kuti ndiye ainyatsoshandisa aida yokumusha kwake akanga. Kuva mukana wokurarama kunze, akasarudza kudzokera kufa Russia.
Muna 1914, mudetembi akararama muMoscow, uye pakazosvika nguva akanga akakurumbira zvikuru. Panguva ino musoro wake vakaberekerwa akarongwa nhetembo akanaka "goy iwe, Russ, mudiwa wangu." Pakuongorora upenyu Nemaeva, zvingaita sokuti guta guru rinounza kwaari inotyisa kupanga yakapfuura, paakanga kwaingova mukomana ane Ryazan vanhuwo vanhuwo zvavo, vakasununguka uye zvikuru vanofara.
Muzviroto zvavo, uye pfungwa akanga agara atandira kusingaperi mitema Mafuro, pamwe mufaro zvizere kufema mhepo inotonhorera. nzvimbo yechizvarirwo All aishamwaridzana hombe, inopenya uye yakachena temberi, iyo inogona kurapa mweya mutizi nemudzungairi uye kuidzosera wechokwadi pakunamata. Yesenin akataura pachake ne "Ndinoenda mupilgrim" vakadzokera kunyika yavo, kuti ndatura uta kwaari, uye paakaita akadaro nyore, chetsika nokuti Russian dzevanhu setsika, zvakare kupinda dzimwe nyika.
Anoona pre-echimurenga Russia sezvo temberi rimwe, kunosimbisa mashoko 'kari -. Mune nguvo chifananidzo " Zvino nyanduri haagoni kufuratira urombo ayo uye chinyakare mararamiro: "The zvipfupi Okolitsa achirira yaoma yemishambangwena."
The nemwoyo Rudo wake yaakaberekerwa, nguva dzose uye kwose kwose vakaziva Yesenin. "Goi, Russ, mudiwa wangu" - sezvo anoreva izvozvo nhetembo yake, ndiko kuti munhu pedyo naye. basa iri waibatanidzwa muunganidzwa nhetembo Yesenin, uyo akanzi "Radunica" wokutanga. In nhetembo iyi, pane imwe maitiro chepfungwa mangwanani nhetembo Nemaeva - ". Mune nguvo chifananidzo" Mashoko dzimwe nguva haana zvakajeka kuti madhorobha muverengi, akadai "Korogod" zviratidzo zvizhinji zvechitendero, zvakadai se "Varume matsvene", "Paradhiso", "Muponesi vanozvininipisa", Muverengi pakarepo akanyika kupinda pave mutsa, chiedza mafaro uye kuchena kuti anoshanyira basa munhu pashure zororo. Nyanduri runogonesa kuti mifananidzo maonero nokurira mifananidzo anotevera mashoko, kusika fungidziro kuti bhero kurira.
Zvinobikwa "goy iwe, Russ, mudikamwa," vakaongorora chaizvo nyore, saka zviri inonyatsoziva chaizvo uye zvakanaka anodira mariri zvose mweya wake, uye tinoonga tarenda rake guru enhetembo. Yesenin - hunhu wakanaka, izvozvo anosika unofara mupfungwa uye akati aisazomboita chinhu kurasikirwa uchi uye nomuapuri chinonhuwira, iro nguva dzose pamwe chete chirimo Muponesi, uye ngochani girlish kuseka rinofananidzwa kurira mhete.
Mudetembi, kunzwa uye achiziva kuti munyika vake nhasi pane chakakomba evanhu dambudziko, sokunge godo vanhuwo zvavo, uyo, sezvo sokuti, zvakawanda dzose uye anonzwisisa upenyu pane kunyange zvake. Uye zvose nokuti munoziva kuti vanakidzwe kunyange zviduku uye chinokosha, vanokudza tsika yemadzitateguru avo. fuma yavo - inyika yakaorera, girini masango uye Mafuro, zvitema nzizi uye madhamu kuti vanofarira nyanduri pristine kunaka kwaro. Nemaeva nhetembo vagara wazadzwa nerufaro ichi.
Chinhu chakadai nevakawanda murimi mudiki Kuziva lyrics zvaisanganisira basa "goy iwe, Russ, mudiwa wangu." Kuongororwa nhetembo kunoratidza zvose pfungwa nyanduri, anotenda nomwoyo wose kuti kana pane muparadhiso panyika, zvechokwadi chaiyo mune Russian kure mumaruwa iyo budiriro ichigere asvika, uye saka akakwanisa kuramba ayo pristine kuchena uye kukwezva. Mafungiro aya mashoko ake, "hachisi paradhiso zvakakodzera, Ipai yokumusha kwangu", raakanga anopedzisa nhetembo yake, ichi Paaipedzisa kutaura zvimwe zvabuda.
Zvino zvirokwazvo zvakava pachena zvakanga kuzotaura Sergey Esenin mu nhetembo yake "goy iwe, Russ, mudiwa wangu." The kuongorora zvakare anotiudza kuti iye anofara chaizvo kunzwa chikamu yokumusha kwavo uye vanhu vavo. Uye kuziva kukosha kwaari zvose pfuma uye kuchipfumisa nyika, nekuti havazombofi kutsiva rudo rwake yechizvarigo yake, yaakanga imbibed naamai vake mukaka uye kuti anodzivirira hwake.
History of Afghanistan kutanga Xix B.
Aleksandr Dyuma fils: Biography, upenyu pachake uye basa
Akadhindwa - kuti ... George bhuku. bhuku kwouzivi
Modern vechidiki mabhuku: nezverudo, chiito, zvokufungidzira, renyaya. Emanyepo vechiduku
Warrior ( "Musashamisika"). James Rupert Rhodes
We rinotsanangura Genre: "Lefty" - dambudziko kana ngano?
Simple uye dzakanaka rakarukwa kuti bvudzi rako zuva nezuva
Decorated keke kumba: vasapedze semis.
Ndinogona kuisa Banks bronchitis: mirayiridzo kushandiswa, zviratidzo uye wongororo
Vanhu vakapfuma kwazvo munyika - imwe itsva
Honoré of Balzac, "Baba Goriot": pfupiso uye tsanangudzo vatambi
Cottage marongerwo Pakuumbwa
Izvo kusarudza decoration runotsveyama kupa?
Peoples 'Friendship University of Russia (PFUR), Institute of Law: wongororo
Minivan Chevrolet Orlando ( "Orlando Chevrolet"): nokurondedzerwa, bvunzo Zvifambiso, zvakakwana
Ndiani tega doro? Nyaya chinonwiwa
Violet zvemiti inonhuhwirira - chiremba musha
Samadonhwe udhakwa vanofanira kusarudza nokuchenjera